वाङलुङ जस्तै मेरा बा! - Hamro Kalam
Home Bannernews वाङलुङ जस्तै मेरा बा!
मेरा बा यस धर्तीबाट बिदा हुनु भएको तिथी अनुसार आज दोश्रो वार्षिकी। यो वर्षदिनमा कुनै त्यस्तो दिन भएन जुन दिन बाको सम्झना नआएको होस्। मान्छेहरु भन्छन्, ‘आफन्त गुमाउनुको पीडा समयले भुलाउँदै जान्छ।’
बाभित्र विशेष केहि खुबी पक्कै थिए। जसरी हरेकका बाभित्र विशेष खुबी हुन्छन् त्यस्तै मेरा बाभित्र पनि थिए। जीन्दगीले गम्भीर शिक्षा दिएको एउटा खुला पुस्तक थिए बा। जस–जसले बा भित्रका ती कुरा पढ्न पाए, उनीहरुले बालाई विर्सनै सकेनन्। चाहे ती गाउँले हुन् या आफन्त अथवा दूरदराजका अन्य मानिसहरु…।
लामिछानेको यो लेख दुई बर्ष अघि सेतोपाटीमा प्रकाशित भएको थियो ।
ठूलो मात्रामा आधुनिक हतियारसहित ५ जना पक्राउ
शंखमूलमा मोटसाइकल दुर्घटना १ जनाको मृत्यु